NANODRONE vCAM, nyochaa nke quadcopter a na igwefoto | Akụkọ akụrụngwa
NANODRONE vCAM, anyị jiri igwefoto nwalee quadcopter a
Nacho Cuesta | | Ngwa
Enwere otutu quadcopters di na ahia, ihe na enyere otutu uzo ozo di oke onu ka ha puta dika NANODRONE vCAM, bụ ngwaahịa zuru oke nke ga-atọ ndị chọrọ ịbanye n'ụwa nke ikuku ikuku ikuku ụtọ.
Ihe mbu nke metutara anyi banyere NANODRONE vCAM mgbe anyi wepuru ya n’igbe ya bu nke ya belata akụkụ, na-ebi naanị ohere 8 x 8 centimeters. N'agbanyeghị na ọ pere mpe, quadcopter a na-eju anyị anya na mgbakwunye ndị na-abụkarị ụdị nke ụdị buru ibu ma dị oke ọnụ, dị ka igwefoto igwefoto iji dekọọ vidiyo na kaadi microSD.
Na ọkwa ụlọ, NANODRONE vCAM nwere mmetụta siri ike na aka. Ọdịdị ya dị egwu na-atọ ụtọ maka ụlọ ya nke nwere ọmalịcha na ịchọ mma nke na-eme ka ọdịdị ikuku nke drone pụta ìhè. Onye ọ bụla nke engine anọ a na-echebe ya nke ọma na ịkụ ya na ụkwụ roba nke na-emekwa ka ọrụ ọdịda ahụ dị nro. Igwe ndị a nwere ngụkọta nke ngwa ahịa anọ nwere ike iwepụ n'ụzọ dị mfe site na ngwongwo igwe nke ọ ga-eji na-eche nche n'enweghị mmerụ ahụ, ọ bara ezigbo uru ịgbanwe ha n'ụzọ dị mfe ebe ọ bụ na ị maara, ndị na-akụ azụ bụ ihe ndị kachasị mfe ịdaba na ịfụ na nke a. ụdị ihe egwuregwu ụmụaka e ji achịkwa redio.
NANODRONE vCAM na-abịa na a n'ime shei ụgbọ elu na kpomkwem mma nchedo nke propela. Nke a bụ ihe mgbakwunye na-atọ ụtọ iji gbochie ndị na-akụ ihe ka ha ghara ịkụ ihe ọ bụla anyị nwere ike ịnwe n'ụlọ, na-eme ka ụgbọ elu ahụ nwee nchebe ma nwee ọ funụ ma ọ bụrụ na anyị wụnye ngwa a, nke ọ dị mkpa iji wepụ ihe ndị anyị ji arụ ọrụ na ngwa anyị atụlewo tupu. Ozugbo agbakwunyere ụlọ ime ụlọ, nha nke quadcopter na-abawanye ruo 13 x 13 centimeters, mana n'agbanyeghị nke ahụ, ọ ka na-egbu ka ọ pere mpe.
Ijikwa NANODRONE vCAM anyị nwere a dị nnọọ zuru ebe nke na-arụ ọrụ na 2,4 Ghz band ma jiri batrị AAA anọ. Stationlọ ọrụ a nwere osisi dị oke nhịahụ iji jikwaa usoro dị iche iche nke mmiri mmiri. Ọ bụ ezie na ejiri mkpịsị aka ekpe iji dozie ogo elu ụgbọ elu na ntụgharị gburugburu ụgbọelu kwụ ọtọ, osisi aka nri na-achịkwa ihu na ihu, azụ na akụkụ.
Ọ dị mma ịnweta ahụmịhe mgbe ị na-eme mbido mbụ mana ọ bụrụ na nke a abụghị nke anyị, ana m akwado gị ka ị debe ikpe ụgbọ elu dị n'ime wee malite ịmara onwe gị na mmegharị dị iche iche n'otu n'otu. Nke ahụ bụ, anyị na-ebu ụzọ mụọ mbuli elu na ọdịda, wee gaa n'ihu ma ọ bụ azụ azụ, na n'ikpeazụ mmegharị akụkụ. Ọ bụrụ na anyị ejiri nwayọ nwayọ, usoro mmụta ga-adị mkpụmkpụ ma anyị ga - enwe ike bido ife efe, awa ga - enye anyị ahụmịhe ịme na-emewanye mgbagwoju anya.
Ozugbo anyị nwetara ya, anyị nwere ike iri uru nke nnukwu agility nke NANODRONE vCAM na-anya isi, ma na osooso na mmegharị. Ọ bụrụ na anyị na-efegharị n’èzí, anyị kwesịrị iburu n’uche ikuku na-efe na n’ihi ntakịrị ịdị arọ ya, ọ naghị adaba iji nwalee ya ma ọ bụrụ na ọ gafere oke ala 28 km / h.
Ekwesiri ighota na oburu na ihe obula NANODRONE vCAM adighi adighi nma ma na-acho ime ihe n'usoro n'otu uzo, uzo a nwere otutu ewepụtụ mkpọchi iji kwụọ ụgwọ maka mmegharị ahụ na-emetụta njikwa. Nke a na - emekarị ma ọ bụrụ na anyị nwere propela mebiri emebi nke na - emetụta ụgbọ elu nke mmiri ahụ n'ihi ekele maka bọtịnụ ndị a, anyị nwere ike idozi akụkụ a.
Ugbu a ọ bụ oge iji gosipụta igwefoto na-etinye NANODRONE vCAM. N'ihi akụkụ a, anyị nwere ike vidiyo vidiyo ụgbọ elu anyị site na echiche nke drone, na-enweta echiche dị egwu na gbaa. Iji dekọọ vidiyo anyị ga-etinye kaadi microSD na azụ nke NANODRONE vCAM ma ozugbo ịmechara, pịa obere bọtịnụ n'otu akụkụ ya. Site na oge ahụ, ndekọ vidiyo ga-amalite ma anyị ga-ebute vidiyo na Pikselụ 480 x 720 mkpebi.
Ogo nke vidiyo ndị e dere na NANODRONE vCA ToytronicM mara ezigbo mma na-atụle obere nha nke optics na mkpebi ikpeazụ. O doro anya na mgbakwunye na mgbakwunye ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmata ihe anyị chọrọ ịnwale.
Na nhọrọ ndị a niile, ọtụtụ n'ime gị ga-eche oge batrị ga-adịru maka NANODRONE vCAM. N'okwu a, oge ụgbọ elu bụ nkeji asaa ihe dị ka nke a, anyị ga-achọ ijikọ ya na ọdụ ụgbọ USB wee chere nkeji iri anọ iji mezue okirikiri ụgwọ nke na-enye anyị ohere ife efe ọzọ na oge kachasị. O doro anya na nkeji asaa ahụ dị ka ụkọ mana ọ bụ ihe a na-ahụkarị n'ọtụtụ drones na quadcopters, ọbụlagodi na-atụle iji igwefoto.
Ọ bụrụ na ị masịrị NANODRONE vCAM ma chọọ itinye onwe gị na iwu nke quadcopter dị ike, ị nwere ike ịzụta ya naanị 89,90 euro.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » NANODRONE vCAM, anyị jiri igwefoto nwalee quadcopter a
Oku nke Ọrụ: Nnyocha nyocha nke agha dị elu
Ọrụ Snap ọhụrụ na Windows 10 na ụzọ ndị ọzọ maka ojiji